आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको आदर्श लघुवित्तको कस्तो छ वित्तीय अवस्था ? « Nepal Bahas
आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको आदर्श लघुवित्तको कस्तो छ वित्तीय अवस्था ?
प्रकाशित मिति : २२ श्रावण २०७८, शुक्रबार १६:४२
२२ साउन, काठमाडौं । गत आवको चौथो त्रैमासमा आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १० लाख ५ हजार मुनाफा कमाएको छ ।
कम्पनीले अघिल्लो आवको चौथो त्रैमासमा १० लाख १७ हजार मुनाफा कमाएको हो । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा कम्पनीको नाफा १ दशमलव १७ प्रतिशतले घटेको हो ।
चुक्तापूँजी १ करोड ४० रहेको छ उक्त कम्पनीले जगेडामा ६३ लाख ८६ हजार सञ्चित गरेको छ । गत आवको चौथो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले ९ करोड ८८ लाख ३३ हजार सापटि लिएर, ११ करोड ९० लाख २३ हजार निक्षेप संकलन गरेर २३ करोड १४ लाख ३५ हजार कर्जा लगानी गरेको छ ।
कम्पनीले ६० लाख बरावरको ६० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले उक्त आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकमा बीओके क्यापिटल नियुक्त गरेको छ ।
त्यसैगरी कम्पनीले शेयर रजिष्ट्रार सम्बन्धी सम्पूूर्ण कार्य गर्ने जिम्मा पनि बीओके क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । अव कम्पनीले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएर स्वीकृति पाएपछि मात्र आईपीओ निष्कासन गर्नेछ ।
कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव असार ३१ गते सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरेको थियो । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी १ करोड ४० लाख रहेको छ । ६० लाख बराबरको आईपीओ निष्कासन पछि पूँजी २ करोड पुग्नेछ ।
नेरुडे लघुवित्तको बोनस शेयर डिम्याट खातामा जम्मा
पाँच लघुवित्तले गरे लाभांश घोषणा, कुनको कति ?
यी तीन लघुवित्तले गरे शेयरधनीलाई लाभांश घोषणा, कुनको कति ?
४७ लघुवित्तको चौथो त्रैमास रिपोर्टः ४५ मुनाफा बढ्दा दुई वटाको घट्यो, कसको कति ?